छाला सुख्खा हुनबाट जोगाउनुनै पचास प्रतिशत समाधान हो – डा. गुरु पौडेल ( छाला , यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ ) - Sawal Nepal
काठमाडाैं सवाल नेपाल २०७७ मंसिर १८, ०७:३१
डा. गुरु पौडेल दमक अस्पतालमा कार्यरत छाला, यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर हुन । इलाममा बाल्यकाल बिताएका पौडेलले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरबाट छात्रवृत्ती कोटामा एमबीबीएस र धरानस्थित बीपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडी हासिल गरेका हुन । एमबीबीएस पूरा गरेपछि जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा २ बर्ष मेडिकल अधिकृतको रुपमा उनले सेवा प्रदान गरे ।
वीपिबाट एमडी कोर्ष पूरा गरेपछि दुई बर्षका लागि उनलाई सेवाकोे अवसर दमक अस्पतालमा जुरेको हो । प्रस्तुत छ डा. पौडेलसग स्वास्थ्य सेवामा प्रवेशको अनुभव र स्वास्थ्य सरोकारका बिषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानीको निष्कर्ष ः
दमक अस्पतालमा यहाको अनुभव कस्तो छ ?
तपाइँसंग सम्बन्धित ( छाला तथा यौन) समस्या चाहिं कत्तिका पाउनु भएको छ ?
ठिक हो, जुनसुकै क्रिम वा लोसनहरुको जथाभावी प्रयोगले त्यस किसिमका समस्याहरु आउँछन । तर सबै लोसन वा क्रिमको प्रयोगले सबैमा त्यो समस्या आउँछ भन्ने हुँदैन । छालाको अवस्था कस्तो छ ? विशेषता के छ ? त्यसका आधारमा मात्रै लोसन वा अन्य औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी कहाँ सुन्दर देखिने होडबाजीमा बिषय विज्ञहरुको परामर्श नलिई जुनसुकै लोसन÷ क्रिमहरु वा औषधिको प्रयोग गरिनु हानिकारक हुन्छ ।
जब पेटमा हुन्छ गडबड